It is me. Ko Niknayman.: မြန်မာပြည်သူတွေ စုပေါင်းတိုက်ပွဲစကြဖို့အချိန်ကျနေပါပြီ။
မြန်မာပြည်သူတွေ စုပေါင်းတိုက်ပွဲစကြဖို့အချိန်ကျနေပါပြီ။
မနေ့ က တာမွေဈေးနားမှာ လူငယ်တွေ ဆန္ဒပြကြတယ်။ နအဖလက်နက်ကိုင်အယောက် ၁၀၀ ကပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်။
မနက်ပိုင်းမှာ လူငယ်တစ်စု ရွှေဂုံတိုင်လမ်းအတိုင်း အာဇာနည်ကုန်းကို ချီတက်ခဲ့ကြတယ်။
သာကေတအထက(၂)က ကျောင်းသားဆယ်ယောက် ဂျာနယ်နဲ့ကျောင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ လာဘ်စားမှုကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။
အားလုံးဝိုင်းရံကြမှ၊ အားလုံးပါဝင်ကြမှ အောင်မြင်မယ့်တိုက်ပွဲပါ။
ခောတ်အဆက်ဆက်မှာ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ပြောခဲ့ကြတယ် “ရရင်ရ မရရင်ချ”။
Posted by Ko Niknayman at 7:28 AM